Jenkins CI, chishandiso che task automation | Kubva kuLinux
Muzuva redu zuva nezuva tinozviwana tiine mhatsa yekudzokorora uye kazhinji inonetesa mabasa. Sa sysadmins, isu tine edu anoshamisa scripts kuita server yekutarisa uye manejimendi mabasa, nepo kune akajairika vashandisi dhairekitori uye yekuchenesa mabasa anowanzo kuve anobatsira uye akakodzera
Jenkins I.C. inounzwa sechishandiso che Kuenderera mberi kusangana (CI, nechidimbu chayo muchirungu) chine chinangwa chekugadzirisa zvinodzokororwa zvikamu zvekuvandudza kwesoftware senge compilations uye kuyedza kweyuniti kuona kuenderera mberi kwekuendeswa kweanoshanda software. Nemapakeji ekuparadzirwa kukuru kwe Linux uye BSD.
Nekudaro, iine dzakasiyana siyana sarudzo idzo maSysadmins nevashandisi vangave vanofarira, senge kuuraya maShell Mirairo kana kukumbira zvinyorwa nenzira yakafanana nezvataizoita muTerminal.
Imwe yehunhu hwayo hunokwezva kugona kumisikidza zviri nyore kuburikidza newebhu graphical interface, yakafanana necrontab asi ine mhinduro yekukurumidza.
Basa Kugadziridza muJenkins CI
Yayo huru mapaneru inotipa, nenzira yakajeka uye inovaraidza, chinzvimbo cheese edu akarongwa mabasa kuratidza kana vakamhanya zvinobudirira kana kwete.
Jenkins Mabasa eIko Yako Kuvaka uye Kuedza
Pamusoro pezvo, pane mukana wekumisikidza kutsamira pakati pemabasa nezviito zvinotevera zvichienderana nemhedzisiro yekuitwa kweumwe neumwe wavo, izvo zvinonyanya kubatsira kugadzirisa mabasa akaomarara. Imwe yemabhenefiti ayo ndeyekuti ine web backend, iyo inotibvumidza isu kubatanidza akati wandei maseva kuitira kugovera mabasa pakati pavo kana kushandisa Master-Varanda zvivakwa kuitira kuti tenzi server inokonzeresa mabasa pane maseva ane hukama nayo semuranda. Iyo inotopa Yakakwirira Kuwanika kugona kuitira kuti kana paine zvikanganiso muTenzi server, muranda anogona kutora pamusoro payo basa uye orchestrate mabasa mune mamwe maseva ese.
Jenkins I.C. Iyo inovandudzwa muJava uye inotora mukana weazvino kugona kwemutauro uyu kubvumira kuwedzerwa kweanoshanda ayo nekushandisa pfekera, iyo inosiyana kubva kuhuwandu uye mishumo yekuuraya kusvika mukugadzirisa masumbu uye masisitimu akagoverwa.
Tinokukoka iwe kuti uedze Jenkins I.C. uye wedzera kugadzirwa kwako kusvika pakukwirira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Jenkins CI, chishandiso che task automation
Yakakura kune otomatiki, ini ndaisaziva chishandiso ichi, maita basa kwazvo !!!
Zvese zvaive zvakanaka kusvika iwe wati zvakagadzirwa muJava.
Java? Izvo zvakaringana kwandiri kuti ndisashandise kana kuikurudzira. Ini ndaive nemusoro wakawanda musoro watove nemasystem akagadzirwa muJava.
Uri kutaura nezve Oracle's Java kana OpenJDK? Nekuti OpenJDK mune dzakawanda kesi yanga iri musoro mukuru wevakawanda vejava Java.
Ndakaedza zvese zviri zviviri, uye kana iwe ukaona iyo OpenJDK yakandipa mamwe matambudziko, oracle JDK futi.
Zuva iro Java rinounganidzwa mumutauro wemuchina, zvirinani kuti rinodudzirwa kune chimwe chinhu chakatwasuka, kana rakavakirwa pane chimwe chinhu senge CLR (hapana bytecode, VM, kana zvinhu zvisinganzwisisike pakati), pamwe ini ndichafunga zvakare.
Java inoita kunge isiri mutauro wakashata (pane kudaro, semutauro inoita senge yakanaka kwazvo), asi kuitiswa kwayo kunoita kunge kunosemesa uye kune njodzi.
Ini ndinoda machira, kugadzira script inoenderana nezvandinoda kuita, zvakare iri python
Pindura kuna arkhan
Task automation ye sysadmin yakanaka, asi ini ndinofunga chinonyanya kukosha nezve Jenkins kuenderera nekubatanidzwa. Kunyanya kuendeswa kwezvikumbiro kuchisanganisa nemidziyo senge Svosve kana Phing (iyo Svosve yePHP). Pamusoro peiyo hombe nhamba yeQA plugins iyo inogona kuwedzerwa.
Nehurombo pane mashoma zvinyorwa. Uye kune rimwe divi, iyo webhu interface haina kunyatsoita, kunyangwe kune vashandisi vane ruzivo rwakawanda.
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Icho chishandiso chinofanirwa kuparadzirwa.
Jenkins inoshandiswa mune mamwe marekodhi evagadziri veCyanogenMod ayo anounganidza maROM asina kuvimbisa kutsigirwa kweCyanogen yepamutemo yemameseji efoni senge Samsung Galaxy Mini.
Izvo zvakanaka, asi ndezve maseva, ini ndaifunga yaive yedesktop. Inofanirwa kuve chishandiso chine simba asi chiri kunze kwenzvimbo yangu yemushandisi.
Izvo zvakanaka uye zvinoshandira kuenderera mberi kusanganiswa kwesoftware zvinoriumba, zuva nezuva uye husiku zvinovaka
Pindura kuna Allen
Idempiere, iyo Open Source Erp ine OSGI tekinoroji